Home Wararka Khilaaf ka dhashay dhaca Kheyraadka dalka (Batroolka) & Farmaajo oo qayb ka...
Khilaaf ka dhashay dhaca Kheyraadka dalka (Batroolka) & Farmaajo oo qayb ka ah
Waxaa maalmihii la soo dhaafay ka jiray Wasaaradda Batroolka dagaal u dhaxeeya hogaanka wasaarada, oo ay gadaal ka taagan yihiin Fahad Yasin iyo Cabdiwali Muudeey iyo qaar kamida shaqaalaha Wasaaradda. Khilaafkaan ayaa soo bilaawday kadib markii golaha wasiirrada ee xukuumadda Soomaaliya ay xilkii ka qaadeen agaasimihii hay’adda batroolka Soomaaliya Ibraahim Cali Xuseen, isla markaana hey’adaas loo magacaabay agaasime cusub ayaa waxaa soo baxaya khilaaf xoog leh iyo is qabqabsi ka dhex jira hay’adda.
Hadaba markii ay saacado yar ka soo wareegatay magaacibsta xilka qadista lagu sameeyay Agaasimaha, ayaa waxaa kasoo horjeestay guddoomiyihii hay’adda batroolka Qaranka Ibraahim Cali Xuseen. Dhanka kale, waxaa xarunta Villa Hargeysa waxaa kulan ku yeeshay guddiga kheyraadka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo guddoomiyihii hey’adda batroolka ee xil ka qaadista lagu sameeyay kasoo horjeestay.
Waxaa la sheegayaa in uu kulankaan oo uu shir guddoominayay Xildhibaan Cabdifitaax Maxamed Cali oo ah guddoomiye ku xigeenka guddiga ahna ku simaha guddoomiyaha ayaa diirrada lagu saaray sababaha keenay xilka qaadista iyo khilaaf la sheegay inuu ka dhex aloolsanyahay wasaaradda batroolka dhexdeeda. Khilaafka ayaa salka ku haya arrimaha maaliyadda ee hey’adda batroolka, kaas oo la sheegay in ay maamulayso wasaaradda batroolka markiisii horena ahaa mid ka madax-bannaan.
Waxyaabaha khilaafka sii murjiyay ayaa waxaa kamid ah cidda soo geleysa qandaraasyada la xiriira shati bixinta baarista shidaalka Soomaaliya, kaas oo caadiyan ay masuul ka tahay hey’adda batroolka. Wararka ayaa intaas ku daraya in wasiirka wasaaradda batroolka Soomaaliya mudadii 4-ta sano aheyd ee uu xilka hayey uu shaqaale badan ka eryay wasaaradda, kuwaas oo qeybtooda lagu sheegay in ay yihiin khuburo ku xeel dheer arrimaha macdanta iyo batroolka.
Iyada oo dalka ay ka jirto khalalaase ka dhashay doorashada ayaa hadana waxa si xoowli ah ku socda qorshaha lagu boobayo hantida u dhaxeeysa umadda Soomaaliyeed.